Curiosities 25 momba ny famolavolana sary | Famoronana an-tserasera
Fran Marin | | Graphic Design, maro
Ao anatin'ny tontolo toa izao dia mahavita manamboatra sary tsy miala ao an-trano miaraka amin'ny tsindry vitsivitsy isika, dia manao fahagagana tokoa. Tsy toy izany foana ary misy ny tantarany Avy aiza izany zava-kanto rehetra izany? Taiza ary oviana no teraka ny famolavolana sary? Ary nanomboka teo, Inona ny anecdotes nomenao anay?
Androany ny andro famoronana sary iraisam-pirenena, ary inona no fomba tsara kokoa hankalazana noho ny fitadidiana ireo tsangambato sy vaovao mifandraika amin'izany? Avelako ianao 25 data ny tsy dia mahaliana ny tontolon'ny famolavolana sary:
Ny fambara voalohany amin'ny fifandraisana ara-javakanto Hita ao amin'ny lava-bato any Lascaux, faritra atsimon'i Frantsa. Ny zava-boary voalohany an'ny olombelona dia namolavola fiteny kanto voahodidin'ny sary sy sary eo anelanelan'ny 15.000 talohan'i Kristy sy 10.000 talohan'i Kristy
Ny boky voalohany misy ny tantara manerantany izay nifantoka tamin'ny tontolon'ny famolavolana sary dia Ny Bokin'ny Kells. Ny mpamorona Irlandey dia nanisy lanja be tamin'ny antsipirian'ny sary ka tsy ela dia nakan'ny mpanakanto taty aoriana izany. Betsaka no milaza fa ity asa ity, na eo aza ny taonany, dia manana kalitao tsara lavitra noho ny ankamaroan'ny sanganasa ankehitriny. Ity tolo-kevitra ity dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX taorian'i Kristy
Talohan'ny Gazety Gutenberg dia nisy kopian'ny boky navoakan'ny tanana natolotr'ireo matihanina tamin'ny kanto kopia, nantsoina mpanao kopia. Betsaka, na dia manolo-tena amin'ny fandikana lahatsoratra aza, tsy nahay namaky teny sy nanoratra izy ireoNoraisin'izy ireo an-tsoratra fotsiny ny endrik'ireo litera.
Ny milina fanontam-pirinty voalohany teo amin'ny tantara dia noforonina manodidina ny Taonjato faha-XNUMX taorian'i JK, tany Torkia. Ny fomba fiasa dia ny bobongolo vita amin'ny hazo mba hanisy tombo-kase ny silhouette amin'ny fanohanana.
Ny voalohany Karatra krismasy dia natao tao 1843 nataon'i John Horsley Callcott, saingy ny nahagaga dia Sir Henry Cole no voalohany notendrena hamolavola ny iray amin'izy ireo ho an'ny tanjona ara-barotra.
El photomontage voalohany ny tantara dia miorina amin'ny taona 1857, ary tsia, mazava ho azy fa tsy nisy ny Photoshop. Ny mpanoratra nahavita an'io dia ny mpanakanto Henry Peach Robinson. Ny fizotrany dia analogy tanteraka ary misy ny fanatevenana ny negatives dimy mampiasa teknika tena mitovy amin'ny collage.
Manodidina ny 1891 William Morris nasehony fa ny famolavolana sary dia mety ho asa ahazoam-bola, asa izay misy fiverenana ara-toekarena. Izy io dia niaraka tamin'ny milina fanontam-pirintiny Kelmscott, izay nahafahany namorona orinasa mifototra amin'ny famolavolana sy ny firafitry ny boky.
Claude Garamond, mpamorona ny endrika Garamond malaza, maty tao anaty fahantrana tanteraka izy.
Matthew Carter dia namolavola ny typeface malaza any Georgia ary nanapa-kevitra ny hanome anarana azy io rehefa avy namaky tantara iray izay nilaza "Mahita vahiny any Georgia izy ireo".
Afisy famandrihana malaza an'i Dadatoa Sam, (Mila anao ho an'ny tafika amerikana ianao) tena aingam-panahy avy amin'ny afisy britanika.
Ny logo Coca-Cola dia tsy noforonina tamin'ny typeface, fa tamin'ny alàlan'ny fomba fanoratra fantatra ankehitriny Script Spencerian.
Ny Tombo-kasen'i Etazonia dia noforonina tamin'ny taona 1770 Sekreteran'ny kongresy teo aloha Charles Thomson.
Woody Allen dia mampiasa typeface mitovy amin'ny sarimihetsika rehetra, antsoina hoe Windso.
Ny filaharana Fibonacci Miseho tsy tapaka amin'ny natiora sy amin'ny zavakanto: ny fananganana bitro, ny fandaminana ravina amin'ny taho, ny asan'ny mpanoratra toa an'i Da Vinci ... Misy karazana drafitra miafina ve izay mampifandray ny matematika amin'ny zavakanto sy ny natiora?
Ny tranonkala voalohany noforonina tamin'ny Internet dia ny "http://info.cern.ch/" ary novolavolain'i Tim Berners-Lee tamin'ny 1992. Mbola mihetsika.
Adobe Photoshop no Fandaharana famolavolana sary mivarotra indrindra ny tantara rehetra ary nadika tamin'ny fiteny maro kokoa (100 ny totaliny).
Ny silhouette an'ny zanaky ny sary famantarana Orinasa mpamokatra Dreamworks An'ny zanak'ilay mpanao sary, Robert Hunt.
Ny famolavolana sary famantarana lafo indrindra amin'ny tantara dia tsy mitaky mihoatra ny ary tsy ambany 1,280,000,000 $, ity no sary famantarana Symantec. Mendrika vola toa izany ve izy?
Ny peta-drindrina lafo indrindra amin'ny tantara dia nanao varotra 690.000 $ ary an'ny Promo Metropolis, sarimihetsika an-tsary nataon'i Fritz Lang (UFA). Ilay afisy dia noforonin'ny Alemanina Heinz Schulz-Neudmann.
Voaporofo fa eo amin'ny tontolon'ny famolavolana, tsy mahomby ny ankamaroan'ny hevitra, ary tsy hoe satria ratsy, fa satria tsy dia tsara aseho izy ireo.
Ny olona mamorona na mpanakanto dia manana atidoha hafa noho ireo olona tsy natokana ho an'ny tontolon'ny zavakanto.
Hisongadina ny fakan-tsary maranitra indrindra eto an-tany 3.200 megapixelsEfitra malalaka ho an'ny habakabaka izay haorina ao Chile izy io. Ity fakantsary ity dia ho afaka maka sary ny vahindanitra lavitra ary milanja 3 taonina eo ho eo.
Scott Fahlman, mpahay siansa informatika iray avy any Etazonia, namorona ny emoticons hialana amin'ny tsy fifankahazoan-kevitra amin'ny mailaka nifanakaloany tamin'ny mpianany.
Ny famolavolana sary dia iray amin'ireo matihanina ambany karama Amin'izao fotoana izao.
Ny lohahevitry ny Andro manerantany famolavolana sary 2014 dia "Izao no ataon'ny mpamorona", tamin'ny 2013 dia «1Love1World», tamin'ny 2012 «Convergence» ary tamin'ny 2010 «manome lanja ny famolavolana aho satria…».
Mahalala bebe kokoa ve ianao? Teneno aho!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Curiosities 25 momba ny famolavolana sary
Bara Malaga dia hoy izy:
Tena mahaliana ireo angona ireo! Tsy fantatro fa tsy dia be karama ireo mpamorona sary. Toa asa mitaky fahaiza-mamorona be dia be amiko izany ary zavatra tokony homentsika lanja kokoa. Fa ny fitsipika eto amin'ity fiarahamonin'ny mpanjifa ity dia ny isa raha…. fa tsy misy amin'izy ireo mahafaly antsika na mahatonga antsika hahatsapa ... tantara hafa ny kanto.
Valiny amin'ny Bar Malaga
Jesosy Hector Gaytan dia hoy izy:
Curiosities 25 ... ary dimy na enina ihany no mifanaraka amin'ny famolavolana sary, ny ambiny dia zava-kanto, rafitra na teknika sary ...
Valiny tamin'i Jesus Hector Gaytan
Anyi Cespedes dia hoy izy:
mahatalanjona! Tiako ny asako
Mamaly an'i Anyi Céspedes